Imfundo imilenze mithathu | News24
Imfundo imilenze mithathu
Uninzi lwabazali okanye lwabantu abadala endiye ndahlangabezana nabo banamaphupha amahle ngabantwana abasebomini babo.
Bonke bafuna abantwana babo baphumelele, babe ngabantu(aba gqibeleleyo). Kumaxesha amaninzi bathetha ngokukwazi ukufunda nokubhala njengesinye sezithako zempumelelo ebantwaneni babo.
Nangona abazali benalamaphupha okufundisa abantwana, kona ukufunda ukubhala kuhlala kungumzabalazo.
Ingaba le ndlela abantu ababona ngayo ukukwazi ukufunda nokubhala kwabantwana babo, iyiyo na ebalibazisayo?
Abantu abadala abaninzi, kwakunye nabo baye baba ngootitshala, amava abo neenkumbulo zokuba nemfundo nokubhala esikolweni, awakho mahle kangako ngenxa yendlela ekwakufundiswa ngayo.
Uninzi lwabantu abadala baye kwizikolo ezinoovimba abangonelanga, babefundiswa ngolwimi abangaluqondiyo, babengakwazi ukufikelela kwizinto zokufundela ulonwabo ngolwimi lwabo kwaye babengabonwa njengabafundi abanamacebo nabanento yokuthetha.
Ezi mfundiso zijike zayindlela abantu abadala abahlangabezana ngayo nabantwana kweli phulo lokufunda.
Kodwa, kunganjani ukuba endaweni yokujonga ukukwazi ukufunda nokubhala njengomsetyenzana wasesikolweni, singakuqonda njengesithethe esigqithiselwa luluntu nesitshintsha izinto kuquka nazo zonke iindlela zokukwazi ukufunda nokubhala kwaye kululutho kuzo zonke iilwimi?
Ukuqonda ukufunda nokubhala kumxholo wezoluntu kuxhobisa abantu abadala nabantwana ekhayeni nasekuhlaleni ngokuphawula ukuba zininzi iindlela abantwana abanokufunda ngazo ukufunda nokubhala.
Ukubhala uluhlu lwezinto ekumele zithengiwe okanye umyalezo obhaliweyo efowunini, ukufunda iphephandaba, ukubaliselana amabali, ukuthetha okanye nokucula oku, zonke ezi zinto zidibene ngamathuba okufunda ukufunda nokubhala azenzekelayo ekhayeni.
Nanjengokuba ekhaya kulapho abantu abadala nabantwana abadadlana behlangabezana nabo basebatsha ukuze kuthethwe, ngokubavumela bahlangabezane kwaye basebenzise ulwimi, ukufunda ukufunda nokubhala kungakhuthazwa ngezi zinto zifanayo nokufumanisa ulwazi, zilulutho, zanelisayo nezinentsingiselo ebantwaneni.
Ezi zinto zenzekayo zinye zinika abantwana ufikelelo oluthe gqolo kwimisetyenzana eyahlukileyo yokufunda nokubhala kunye nethuba lokusebenzisa ulwimi kubomi babo bamihla le, kubanceda benze ulwayamaniso oluhle nokufunda nokubhala.
Abantu abadala kunye nabanye abantu abadadlana abafundayo baba yimifuziselo emihle yokufunda okanye yokufunda nokubhala, kodwa kufuneka bazi ngala mathuba okufunda nokubhala ngokuphendulana baze bawaxhamle.
Kufuneka bayixabise indima yabo njengootitshala bokuqala babantwana babo, baqonde ukuba ulwimi lwabo lunexabiso kwaye bazi ukuba ngokunika abantwana babo isiseko esomeleleyo ngolwimi lwabo lwenkobe, bazawube bebanceda bafunde ulwimi lwesibini xa betshintshela esiNgesini kwiBakala lesi-4.
Umnqweno, ngokomxholo wezokuhlala, kukuba abantu abadala, ngokwendalo, bancede abantwana babo bahlole iingcamango kwaye bafunde ulwimi.
Kule nkqubo, kukho ukusebenzisana ukudala ulwazi ngokuthetha nokumamela, kwaye bengazi, abantu abadala bayabaxhasa abantwana babo ekufezekiseni amaphupha abanawo ngabo, kuze ukufundela ulonwabo kuvele nako!
Uphando oluninzi lubonise ukuba xa abantwana befundela ulonwabo baqhuba ngcono esikolweni kunoogxa babo abangakwenziyo oku.
Ngale ndlela yokungeniswa ngokwentlalo kukufunda nokubhala, nenokukhangeleka njengeqhelekileyo kubantu abathetha isiNgesi nabanakho ukufikelela kuludwe lweencwadi namabali angapheliyo, abantwana bangaya esikolweni besemandleni kwaye bezithembile. Kodwa kubantwana abathetha iilwimi zeSintu, ingakumbi abo bahlala emaphandleni noomakhulu nootamkhulu babo okanye abo baziintloko kumakhaya abo, oku akuyonto iqhelekileyo kwaye le ndlela yasekuhlaleni yokuhlangabezana nokufunda nokubhala ixabiseke kakhulu. Nje ukuba abantu abadala bebeyazi indlela abanamandla ngayo, nokuba ukuthetha nokubaliselana amabali ngolwimi lweenkobe yenye yezona ndlela zisebenzayo zokunika abantwana izixhobo abaza kuzidinga ukuze bafunde ukufunda, ukubhala, nokuhlola ihlabathi.
Kwaye, ukuba izikolo nazo ziyakuqonda ukufunda nokubhala njengesithethe sezentlalo – zisebenze kunye namakhaya neendawo zokuhlala – iziphiwo zabantwana zingavuleleka!
Bonke abantu baza kusebenza kunye njengekwayara enkulu yezixhobo yokufunda nokubhala, besebenzisa ulwazi, iilwimi, izakhono kunye nenkcubeko abanayo ngaphakathi ukuze banike abantwana bethu elona thuba lingcono linokubakho ukuze bazalisekise isiphiwo sabo ebomini.
Njengonopotyi omilenze mithathu, okanye njengekwayara yomculo wezixhobo, iphulo leNal’ibali iStory Powered School lenza kanye oku: lunxibelelanisa izikolo, amakhaya kunye neendawo zokuhlala emaphandleni ase-KwaZulu-Natal naseMpuma Koloni kule nkqubo yokufundisa abantwana bethu ukufunda nokubhala nokubaxhobisa.
Kodwa sidinga abantu abongezelelekileyo ukuba bangenelele, ukuze sifikelele kumandla abo njengootitshala bokuqala babantwana babo nakwixabiso loovimba babo bemveli kunye nelwimi zabo zemveli.
Kufuneka sidale imfuno yeencwadi ezongezelelekileyo kunye namabali ngeza lwimi kwaye sikhulule abantwana bethu ngeencwadi namabali angawethu.
UMalusi Ntoyapi yingcali yezokufunda nokubhala eluntwini esebenzela ukhankaso lokufundela ukuzonwabisa lweNal’ibali.
Ukuze uzibandakanye okanye ngenkcazelo ethe vetshe malunga nokhankaso lokufundela ukuzonwabisa lwe- Nalíbali, iphulo lalo i- Story Powered Schools okanye amandla okufunda nokubalisa amabali ebantwaneni, tyelela ku-www.storypoweredschools.org naku www.storypoweredschools.mobi.